यसरी राख्नुहोस् कलेजोलाई स्वस्थ्य
लसुनः लसुनमा सेलेनियम हुन्छ, जसले कलेजोमा रहेको हानिकारक टक्सिन सफा गर्न सघाउँछ ।
दालचिनीः यसमा ग्लूकोज र फक्टोज हुन्छ, जो कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्न आवश्यक हुन्छ ।
चुकन्दरः यसमा बिटा क्यारोटिन हुन्छ, जसले कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्छ ।
कागतिः कागतिमा साइट्रिक एसिड हुन्छ । कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि यो पनि निकै....
यसरी थाहा पाउनुहोस गर्भवती भए वा नभएको
प्रायजसो महिलाहरु गर्भवती भएको थाहा पाउन प्रेग्नेन्सी किटको प्रयोग गर्ने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरु मेडिकल गएर किट ल्याउन लजाउने गर्छन् । महिलाहरुका लागि आवश्यक प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न घरेलु तथा प्राकृतिक उपायहरु पनी अपनाउन सकिन्छ । जसले गर्भवती भए नभएको पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ ।
योग गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा नभुल्नुहोस्
योग स्वस्थ्य शरीर, मस्तिष्क र आत्माको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ । तर, योग गर्दा केहि सावधानी अपनाउनुपर्छ । योग गर्नुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
१. योग गर्नसाथ तुरुन्तै नुहाउनु हुँदैन । योग गर्दा शारीरिक तापमान बढ्छ । त्यसैले योग गरेको एक घण्टापछि मात्र....
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुहोस्
कपाल झर्ने समस्या अहिलेको प्राय सबै महिलाहरुको समस्या हुन पुगेको छ । कपाल झरेको कारण धेरै महिला चिन्तित हुनुहुन्छ होला तर अब चिन्तित नहुनुहोस् यी ३ उपाय अपनाएर कपाल झर्नबाट छुट्कारा पायनुहोस् ।
१. प्याजको जुसः प्याज तरकारीको लागी मात्र नभएर अब सुन्दरताको लागी पनि....
यसरी बनाउनुहोस् गर्मीमा सुन्दर अनुहार
गर्मीमा अनुहारको विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ । गर्मीमा अनुहारको फोहोर जाने सम्भावना बढी हुने भएकाले अनुहारको बढी हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हटाउनुहोस् घरेलु विधिबाट मृगौलाको पथरी
मृगौलामा पथरी हुने संभावना धेरैलाई हुन्छ । यसलाई घरेलु विधिबाट यसरी हटाउन सकिन्छ ।
– एक गिलास पानीमा दुई चम्चा गाजरको बीज भिजाउने र घटेर आधा नहुन्जेल सम्म तताउँने । दिनमा दुई पटक आधा–आधा कप पिउँने, मृगौलाको पथरी निस्कन्छ ।
– एक कप....
एक्सरसाइज गर्नु अघि खानुहोस् यी खानेकुरा
खालि पेटमा एक्सरसाइज गर्नाले शरिरलाई हानी पुर्याउँछ । खालि पेटमा एक्सरसाइज गर्नाले ज्यान थाक्छ र पेट खालि हुनाले धेरै खान खाइन्छ । जसले गर्दा ज्यान झन मोटाउँछ । त्यसैले एक्सरसाइज गर्नु अघि यी खानेकुरा खानुहोस् ।
दूधः एक गिलास तातो दूध पिउँनुहोस्, पोष्टिक तत्व मात्रै....
किन मोटाउँछन् विवाहपछि अधिकांस महिला ?
विवाह पछि महिलाको तौल बढ्ने कारण यस्ता छन् ।
१. निद्रा पूरा नहुनुः विवाह पश्चात धेरै महिलाको सुत्ने र उठ्ने समय बदलिन्छ । सात घन्टा भन्दा कम सुत्न पाउने भएकाले निद्रा पूरा हुँदैन । यसले तौल बढाउन भूमिका खेल्छ ।
२. हर्मोनल परिवर्तनः विवाह पछि....
कसरी कम गर्ने कोलेस्ट्रोल ?
१. भोजनमा मासुको प्रयोग कम गर्ने । यदि मासु खानै पर्नेभए छाला भएको मासु खाने । विफ, पोर्क र भेडाको मासु खान छाडेको राम्रो ।
२. दैनिक भोजनमा ५ देखि १० ग्राम फाइबर समावेश गर्नुपर्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ ।